သေဆုံးသွားတဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းအတွက် ပိုက်ဆံစုပြီး ကမ္ဗည်းတိုင် လုပ်ပေးခဲ့သူလေး - YOYARLAY Digital Media and News
ကာလဘ် ကလာကူလာခ့် (Kaleb Klakulak) ဆိုတဲ့ ၁၂ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးဟာ ဝါရန်၊ မီချီဂန်မှာနေထိုင်တဲ့ ဒုတိယတန်း ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မိဘတွေဟာ ကွာရှင်းထားတာကြောင့် ကာလဘ်ဟာ ရှက်ပြီး ဘယ်သူနဲ့မှ သူငယ်ချင်း မလုပ်တတ်ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူဟာ ကေ.ဂျေ. ဂရော့စ် (K.J. Gross) ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ စတွေ့ခဲ့တာပါပဲ။ ‘သူကြိုက်တာမှန်သမျှ ကျွန်တော်အကြိုက်တွေချည်းပါပဲ … ဒါက နည်းနည်းတော့ ရယ်စရာကောင်းပါတယ်’ လို့ ကာလဘ်က ပြောတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာ အနေအထိုင်အေးပြီးတော့ သဘောကောင်းကြပါတယ်။
ကေ.ဂျေဟာ သွေးကင်ဆာရောဂါကို အချိန်ကြာကြာ ခံစားရပြီးနောက် နှလုံးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မေလမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကေ.ဂျေရဲ့အုတ်ဂူမှာ ကမ္ဗည်းတိုင်တစ်ခု လုပ်ပေးဖို့ ကေ.ဂျေရဲ့အမေက ငွေကြေးမတတ်နိုင်တာကို သိလိုက်ရတဲ့အတွက် ကာလဘ်က ကူညီဖို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကာလဘ်ရဲ့အမေ ခရစ်စတီဟောလ် (Kristy Hall) က ‘ကေ.ဂျေတစ်ယောက် ကျွန်မတို့ဘဝထဲ ဝင်လာတာ အရမ်းအံ့ဩဖို့ ကောင်းပါတယ်၊ သူတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က စကားတောင် မပြောနိုင်ဘဲ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ ဆော့ကြတယ်… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရှိကြပါတယ်’ လို့ပြောပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အမေတွေလည်း ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်။ ‘ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လုံးက တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တစ်ခုလပ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်ပြောဖြစ်ကြတယ်’ လို့ ဆိုပါတယ်။
ကေ.ဂျေမှာ သွေးကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နေပြီး သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ခွဲစိတ်မှုတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့ရတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှုတွေလည်း ဖြစ်တာမို့လို့ တစ်ခါတစ်လေ အပြင်တောင် မထွက်နိုင်ပါဘူး။ သူအပြင်ကို ထွက်မကစားနိုင်တဲ့အခါ ကာလဘ်က အိမ်ကိုလာပြီး အတူကစားတယ်။ မနှစ်က ဒီဇင်ဘာမှာ ကေ.ဂျေဟာ ရောဂါပိုဆိုးလာတယ်။ ဆရာဝန်တွေက သူ့ကို ပိုပြီးဂရုစိုက် ကုသပေးဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ ကေ.ဂျေအမေက ကာလဘ်နဲ့ သူ့အမေဆီကို သတင်းဆိုးတစ်ခုနဲ့အတူ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ သတိမေ့နေတဲ့ကေ.ဂျေရဲ့ အိပ်ရာဘေးမှာ ရှိနေကြတယ်။ ကာလဘ်က သူ့သူငယ်ချင်းကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကေ.ဂျေကို ဂရုစိုက် စောင့်ရှောက်ဖို့ အလုပ်ထွက်လိုက်တဲ့ ကေ.ဂျေရဲ့ အမေဟာလည်း စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ သူရဲ့သားကို မြှုပ်နှံပေးလိုက်ပေမဲ့ သားလေးအတွက် ကမ္ဗည်းတိုင်တစ်ခု လုပ်ပေးဖို့ ငွေကြေး မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ကာလဘ်ဟာ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ အမေအတွက် တစ်ခုခု လုပ်ပေးချင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အမေကို ‘အမေ.. ကမ္ဗည်းတိုင် တစ်ခုလုပ်ရင် ဘယ်လောက်ကုန်လဲ’ လို့ မေးခဲ့ပါတယ်။
ကာလဘ်က ဆိုဒါဘူးခွံတွေ အများကြီး စုတယ်။ သူပုလင်းခွံတွေကို လိုက်စုဖို့ သူ့အမေက ကားနဲ့လိုက်ပို့ပြီး ကားနဲ့ အပြည့်ဖြည့်ပြီးရင် ကုန်စုံဆိုင်မှာ ပြန်လဲပါတယ်။ ကာလဘ်ရဲ့ အမေကလည်း PayPal အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီး ကမ္ဗည်းတိုင်အတွက် အလှူခံခဲ့တာအပါ အားလုံးပေါင်း ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ စုမိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့သားအမိဟာ ကေ.ဂျေရဲ့အမေကို အလည်လာဖို့ဖိတ်ပြီး ကမ္ဗည်းတိုင် လုပ်ပေးမဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။ ‘ကျွန်မ ဝမ်းသာလွန်းလို့ ငိုတောင်ငိုမိပါတယ်… တကယ် မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ ကျွန်မ သာလေး အနားယူသွားတဲ့နေရာကို မြင်နိုင်ပြီ၊ ကျွန်မသွားပြီး သားလေးကို အဖော်ပြုပေးလို့ရမဲ့နေရာ ရှိလာပြီ’ လို့ ကေ.ဂျေရဲ့အမေက ဆိုပါတယ်။
အလှူခံလို့ရတဲ့ ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ နဲ့ ကမ္ဗည်းတိုင်လုပ်ပေးပြီး ကျန်တဲ့ငွေတွေအားလုံးကို ကေ.ဂျေရဲ့အမေကို ပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ကာလဘ်အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးရတာ အရမ်းခက်ခဲမှာပါ။ ဒီလိုမျိုးကို သူဖြစ်ချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Ref: www.elitereaders.com “After his best friend died,a12-year-old Michigan boy raised $2,500 to pay for the headstone”
Previous Previous post: ဖိလစ်ပိုင်ဆီက သိမ်းယူသွားခဲ့တဲ့ ခေါင်းလောင်းတွေကို ရာစုနှစ် တစ်ခုကျော် ကြာအပြီးမှာ အမေရိကန် ပြန်လည်ပေးအပ်
Next Next post: ၂၀၁၉ မှာ ဒစ္စနေးကနေ ပွဲထုတ်လာမယ့် အာလာဒင်ရုပ်ရှင်ရဲ့ First Look ပုံရိပ်တွေ ထွက်ရှိလာ